Chekwaa batrị na Apple Watch | Akụkọ akụrụngwa
Ndụmọdụ 10 iji chekwaa ndụ batrị na Apple Watch gị
Villamandos | | smartwatch
El Apple Watch Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime kpakpando ngwaọrụ nke ihe anyị nwere na 2015, nke nwetaworo ọnụ ọgụgụ ahịa dị ukwuu n'ahịa ma jikwaa mejuo ọtụtụ ndị ọrụ zụrụ otu. Dabere na nyocha dị iche iche, ihe ruru 97% nke ndị ọrụ zụrụ otu Apple's smartwatches nwere afọ ojuju na nzụta ha.
Otú ọ dị, Ojuju afọ ojuju ebuteghị ka nsogbu batrị batrị nke mere na ngwaọrụ niile nke ụdị a ebe ọ bụ na ọ dịbeghị anya ha kụrụ ahịa. Dị ka ngwaọrụ mkpanaka, ọ dị mkpa ịkwụ ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ọnọdụ niile, ọ bụ ezie na ọ dabere na iji ya, kwa ụbọchị, ihe na-adịchaghị amasị onye ọ bụla.
Na mgbakwunye, n'ọnọdụ ụfọdụ, ndụ batrị nke Apple Watch anaghị ekwe ka ọ "lanarị" ruo na njedebe nke ụbọchị, yabụ taa anyị chọrọ ịmepụta ndepụta a nke ndụmọdụ 10 nke ị nwere ike ịchekwa batrị na Apple Watch gị. ma si otú ịgbatị ya n'ụzọ dị ukwuu ha obodo kwụụrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere Apple smartwatch na batrị anaghị eru na njedebe nke ụbọchị ma ọ bụ na ọ gaghị adịgide ihe ị tụrụ anya ya, nyochaa ndụmọdụ ị ga-ahụ n'okpuru n'ihi na ikekwe itinye ụfọdụ n'ime ha ga-edozi nsogbu gị na nke ngwaọrụ gị.
1 Ịgba ịgba akwụkwọ
2 Malitegharịa ekwentị Apple mgbe ọ bụla
3 Wụnye naanị ngwa ndị dị mkpa
4 Kwụsị ngwa ị chere na-eri oke
5 Yiri uwe ojii ojii ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala agba gbara ọchịchịrị
6 Mickey amaka mana o rie igba
7 Deactivate nhọrọ "bulie nkwojiaka"
8 Jiri ọnọdụ "Edogbula onwe gị"
9 Gbọelu mode, gị ezigbo enyi na oké egwu oge
10 Mee ọ rụọ ọrụ ọnọdụ nchekwa nchekwa
Ịgba ịgba akwụkwọ
Anya elekere na-enye ọtụtụ ihe ndị ọzọ ohere nata ozi site na ngwa ekwenti anyi ozigbo, ma zaghachi ha. O di nwute na nke a na-eri oke batrị, karisia ma oburu na anyi nwere otutu ngwa nke ahaziri na smartwatch anyi ka aghara ime ka ha mata.
WhatsApp, Telegram, Twitter ma ọ bụ Facebook bụ ụfọdụ n'ime ọtụtụ ngwa ị ga-esi enweta ọkwa. Oge ọ bụla anyị natara ọkwa, ihuenyo Apple Watch na-enwu ma jiri Bluetooth, nke na-emetụta batrị ahụ.
Ichekwa batrị ma gbatịa ọchịchị obodo nke ngwaọrụ anyị hazie naanị ngwa ndị dị mkpa ịchọrọ ị nweta ọkwa sitere na.
Malitegharịa ekwentị Apple mgbe ọ bụla
Ighaghachi ngwaọrụ nke teknụzụ bụ ihe ọtụtụ ndị ọkachamara na-atụkarị aro iji dozie ọtụtụ nsogbu nwere ike ibilite, gụnyere nke ị consumptionụbiga batrị oke. Na Apple Watch ọ na-eme kpọmkwem otu ihe ahụ bụ na ịmalitegharị ngwaọrụ nwere ike idozi ọtụtụ nsogbu.
Ma ọ bụ na mgbe ịmalitegharị ma ọ bụ gbanyụọ smartwatch niile na-agba ọsọ usoro na-emechi ma bido ọzọ. Ọ bụrụ na otu n'ime ha na-arụ ọrụ na-ezighi ezi ma dịka ọmụmaatụ imefusị batrị karịa ihe dị mkpa, nke a ga-enye anyị ohere ịbawanye ọchịchị obodo.
Ọ bụrụ na ị nwere Apple Watch, malitegharia ya oge niile na nke a nwere ike iwepụ gị n'ụzọ nsogbu na-enweghị nchekasị, metụtara batrị ma ọ bụ ihe ọzọ. Cheta na ịmalitegharị ya, naanị ị pịa ma jide okpueze dijitalụ na bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe ihuenyo gbara ọchịchịrị.
Wụnye naanị ngwa ndị dị mkpa
Ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere ịwụnye ọtụtụ ngwa na smartphones ma ọ bụ smartwatches, nke anyị na-anaghị ejikarị emechaa ma nke anyị na-ahapụ ebe ahụ na-enweghị iji ha. N'ọnọdụ ụfọdụ ngwa ndị a nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ na ndabere, na-ewepụ akụrụngwa yana imefusịkwa batrị.
Ndụmọdụ anyị bụ ịwụnye ngwa ndị dị mkpa na Apple Watch gị iji chekwaa batrị na akụrụngwa. Anyị maara na ịwụnye ngwa na ngwa ndị ọzọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe a na-apụghị izere ezere, ma gbalịa ịchịkwa onwe gị ma soro ha ị ga-eme batrị ngwaọrụ gị. Enwere ike iji ndụmọdụ a maka iPhone gị na izugbe maka ngwaọrụ ọ bụla.
Kwụsị ngwa ị chere na-eri oke
Ọ naghị adịkarị nkịtị maka ngwa iji rie ọtụtụ batrị na Apple Watch anyị, mana Ọ bụrụ n’ịchọpụta na mgbe imelite ngwa ọ na-ewe nnukwu batrị, ezigbo echiche nwere ike ịkwụsị ya iji zere iwere batrị ahụ. Pụrụ ọbụna tụlee iwepu kpamkpam na dochie ya ọzọ.
N'ezie, buru n'uche na nke a adịchaghị mma na ọ bụ naanị n'okwu ndị dịpụrụ adịpụ ka ngwa na-eri batrị n'ọtụtụ dị ukwuu.
Yiri uwe ojii ojii ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala agba gbara ọchịchịrị
Ihuenyo nke Apple Watch anyị bụ OLED, ụdị ihuenyo nke chọrọ ike karịa iji gosipụta agba ọkụ karịa ndị gbara ọchịchịrị. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị ọchịchịala nke ngwaọrụ gị ị kwesịrị itinye a nwa watchface ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ọchịchịrị.
Ọ bụrụ n ’echeghị ọchịchị obodo nke smart smart Apple gị, tinye ihu ihe ịchọrọ ịchọrọ ma nwee ọ itụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na echefula ileba batrị gị anya ma debekwa ebe ị na-ahụ maka ịgba ụgwọ smartwatch gị.
Mickey amaka mana o rie igba
Ọtụtụ n'ime smart smart na ahịa na-enye gị ohere idowe ihe nkiri dị iche iche dị ka ihu elekere, n'ihe banyere Apple Watch ọ dị iche na ihe atụ anyị nwere ike itinye Mickey na ngagharị iji gwa anyị oge ahụ. Ndị a animated nzụkọ rie a nnukwu ego nke batrị ọtụtụ mgbe otú anyị nkwanye ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbatị ndụ nke ngwaọrụ gị bụ ihichapụ ha.
Iji nwee ike ịkwụsị mmegharị na mmegharị nke Apple Watch gị, ị ga-ahụ nnweta site na ngwa Apple Watch na iPhone gaa na Nhọrọ General, wee banye na nnweta ebe ị ga-emerịrị nhọrọ ndị a "Belata Movement" na "Belata Transparencies" .
Deactivate nhọrọ "bulie nkwojiaka"
Apple Watch na-enye anyị ohere na ihuenyo ya na-agbanye oge ọ bụla anyị weliri mkpịsị aka anyị. Nke a pụtara na oge ọ bụla anyị weliri mkpịsị aka anyị ile anya na nche ahụ, ngebichi ya na-agbanye tupu anyị achọ ya, ihe na-enweghị mgbagha ọ bụla dị mma. Nsogbu bụ na oge ọ bụla anyị weliri nkwojiaka, ime ihe ọ bụla ihuenyo ahụ na-agbanye na mkpofu batrị.
Ọ bụrụ n’ịchọghi ihu etu batrị gị si emebi n’efu, gbanyụọ nhọrọ “bulie nkwojiaka”. Will ga-achọpụta ngwa ngwa ka obodo kwụụrụ gị Apple Watch na-agbatị ogologo oge, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ihuenyo nke elekere gị agaghị enwu naanị site na ibuli ya.
Jiri ọnọdụ "Edogbula onwe gị"
El Apple Watch "Ekwela Nsogbu" mode Dị ka ọ dị na iPhone, ọ na-enye ohere ka ngwaọrụ rụọ ọrụ n'ụzọ nkịtị, ọ bụ ezie na oge ọ bụla anyị natara ọkwa ngosi ihuenyo agaghị enwu enwu, ọ gaghị ada ụda ma ọ bụ maa jijiji na nchekwa batrị doro anya.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na Apple Watch gị dị obere na batrị, ịgbalite ọnọdụ a nwere ike ịbụ nnukwu nhọrọ iji gbatị ikike ọchịchị oge.
Gbọelu mode, gị ezigbo enyi na oké egwu oge
Ọnọdụ ụgbọelu na-ahapụ Apple Watch dị ka elekere nkịtị na-enweghị ohere ịme ihe ọ bụla chọrọ WiFi ma ọ bụ Bluetooh. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịga n'ihu na-eme ihe ụfọdụ na smartwatch anyị, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ụzọ zuru ezu dịka ọ ga-eme ma ọ bụrụ na anyị arụghị ọrụ a.
Mee ọ rụọ ọrụ ọnọdụ nchekwa nchekwa
More na ndị ọzọ ngwaọrụ incorporate a ọnọdụ nchekwa ike na Apple Watch n'ezie ọ na-enyekwa anyị ya. Ọnọdụ a na-enye anyị ohere iru njedebe nke ụbọchị, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị nwere batrị dị ala na smartwatch na-arụ ọrụ n'ọnọdụ a ga-abụ elekere ọ bụla.
Dị ka anyị na-ekwu mgbe niile, ndị a bụ naanị ndụmọdụ 10 nke ọtụtụ ndị dị adị n'ezie iji chekwaa batrị na Apple Watch gị. Ọzọkwa, dị ka oge niile, anyị ga-achọ ka ị gwa anyị ndụmọdụ anyị fọdụrụ ma ọ bụ ihe ị ga-eji gbalịa ịgbatị nnwere onwe nke igwe elekere gị si na ụlọ ọrụ Cupertino.
Chọpụtala ndụ batrị dị oke na Apple Watch gị?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ndụmọdụ 10 iji chekwaa ndụ batrị na Apple Watch gị
5 smartphones na a 6-anụ ọhịa ihuenyo nke ga-eme ka ị daa na ịhụnanya
Otu esi egbochi Windows 10 inyocha gị